Global Voices teny Malagasy · 24 Mey 2019
24 Mey 2019
Tantara tamin'ny 24 Mey 2019
Ahoana no hanalefahana ireo mpisompatra anaty aterineto: Torohevitra avy eny an-kianja
Fahalalahàna miteny24 Mey 2019
Mizara ny heviny momba izay fomba hamerana ny fisomparana anaty aterineto ireo liana amin'ny zo nomerika - nefa tsy mikitikitika ny fahalalahana maneho hevitra. Fiarahanay miasa voalohany amin'ny ONG pakistaney Bolo Bhi izy ity.
Fantaro i Ian McCallum, mpampiantrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTech ho an'ny 23-29 Mey
Antsafa24 Mey 2019
Fantaro bebe kokoa ny momba an'i Ian McCallum, ilay mpampiantrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTechTwitter mandritra ny 23-29 May 209. Hizara ny fomba fijeriny ny fiteny Lunaape izy.
‘Tsy hifidy izahay raha tsy vita ny làlana': hetsika tsy fankatoavana sivily any amin'ireo faritra any India
Azia Atsimo24 Mey 2019
Nanosika ny Goans hanao ankivy ny fifidianana Lok Sabha ao amin'ny tananakelin'i Marlem any amin'ny fanjakana Indiana any Goa ny lalan-dratsy, ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ary ny tsy fisian'ny famatsiana herinaratra.
Ahoana ny fitsidihana fiaran-dalamby ao Shina mba tsy ho voampanga ho manao fitsikilovana
Azia Atsinanana24 Mey 2019
Raha hitsidika hijery fiaran-dalamby ao Shina ianao dia mila mitandrina, raha tsy izany ho voampanga ho mitsikilo indostria, araka ny filazan'ilay mpitsidika fiaran-dalamby malaza sady mpisera YouTube, RailKingJP.
Tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiswahili
Afrika Mainty24 Mey 2019
Mwandani mitatitra ny Tondro Isan-taona momba ny Fahalalahan'ny Gazety manerantany (2005). Raha laharana faha-75 i Tanzania, dia misy kosa ireo firenena Afrikana tahaka an'i Benin, Namibia, Maorisy, sy Mali lasa alohan'i Etazonia (faha-44), izay nihemotra toerana 20 tamin'ity taona 2005 ity.